MAXKAMADDAHOOW MEESHAA KA SII WADDA
(MAXAAKIIMTA Vs MOORYAANTA )
W/D: Mursal Max'ed Max'uud(Garaad)E-mail: stethy1@yahoo.com
Markii ay dhacday Dowladddii dhexe ee Soomaaliya, meeshana ay ka baxday howshii Ciidamadda nabadgelyaddu ay u hayeen dadka, ayaa waxaa bedelay Meleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan, kana qowlaysta Wadooyinka, lacago baad ahna ka qaata Gaadiidka iyo Dadwaynaha caadiga ahba. Arintaas oo Suuqyo iyo Wadooyin badanba ka dhigtay goobo haawanaya oo aanay cidina isticmaalin. Cabsi laga qabo in lagu furto ama lagu dhaco hantidooda darteed, intaas uun kuma ekayn dhibaatadda meleeshiyaadkuye waxaa sidoo kale laga caagay in Haweenku ay si caadiya uga soo adeegtaan suuqyadda, haba ugu darnaato xliyadda gabalku marka uu dhaco ka danbeeya.
Dhibkii markuu balaartay oo qofwalbaahina gundihiisa(hoostiisa)ka arkay ayaa Culimo-udiin Soomaaliyeed soo jeediyeen in waxa kaliya ee dhibkaasi looga bixikaraa ay tahay iyadoo loo laabto Allaah(S.W.T) iyo ku dhaqanka shareecadda Islaamka. Iyaddoo fikirkaas Saliimka ah laga ambaqaadayana waxaa markii ugu horaysay laga hirgeliyey Maxkamad Islaami ah Waqooyiga Muqdisho, xili ay Nabad gelyo la'aan aad u xumi ka jirtay Muqdisho gaar ahaan Waqooyiga. Maxkamaddaas oo uu hormuud ka ahaa Sh. Cali dheere, waxay si wayn ugu guulaysatay in ay soo celiso amnigii iyo xasiloonidii goobaha ay ka howlgalaysay. Waxaana xusid mudan in qofku uu horay u qaadanayey waxyaabaha qaaliga ah sida Lacagta iyo Dahabka oo kale, iyadoo cidina aanay saa u eegi karaynin.
Maxkamaddii Islaamiga ahayd ee xiligaas waxay si wayn u kasbatay taageeradda dadka iyadoo shacbiyad badana ku heshay. Hogaamiyihii Siyaasadda W/Muqdisho ee xiligaas oo aan u bogin xowligii ay ku socotay Maxkamaddu iyo Laamaha ay ka samaysanaysay guud ahaan Degmooyinka W/Muqdisho ayaa bilaabay dhaq-dhaqaaq xoog leh oo uu ku wiiqayo awooddii Maxkamaddaasi, isagoo si xeeladaysan adeegsanayana wuxuu Gudoomiye ku xigeenka Urur-Siyaadadeedkiisii ka dhigay Wadaadkii Labaad ee ugu sareeyey Maxaakimtaas. Taasina waxay soo dedejisay Bur-bur ku yimaadda Maxaakimtii Islaamiga ahaa, dibna loogu laabto xiliyaddii dhibka badnaa ee Dilka dhaca iyo Fowdadda. Hogaamiye Siyaasadeedkii xiligaas ee W/Muqdisho waxaa latilmaamaa in uu iminka aad uga qoomamaynayo fara-gelintii uu ku sameeyey Maxaakimtii Islaamiga ahaa.
Sikastaba ha ahaatee isku dayaddii ahaa in la sameeyo Maxaakim Islaamiya halkaas kuma ekaanin, lagamana niyad jebin, balse waa la sii dhaqaajiyey walloow ay gaabis ku socotay. Waa Illaahay mahadiise hadda waxaa jira Maxkamaddo Islaamiya oo leh hal-dalad oo midaysa, waxayna howl mug leh oo muuqata u qabtaan dadka ku dhaqan Xamar. Maanta haddii gaari la dhaco Lambarka lagaraacaahi waa kan Maxaakimta. Haddii Koox dabley ihi ay wax afduubtaan cidda loogu yeero in ay wax ka qabtaan waa Ciidamadda Maxaakiimta. Ninka Xoolihiisa laga haysto ama handadaad lagula kaco meesha kaliya ee uu u dacwoon karaahi waa Maxkamadaha Islaamiga ah. Waxaan layska in dho tiri karin in Maxkamaduhu ay wax muuqda ka qabtayn meelo badan oo halaq mareen ahaa, oo min siyaasi ilaa qof caadi ah uu wax ka qaban waayey, sida Xaafadda Sii-sii oo ku caan ahayd in la geeyo Gawaaridda lasoo kala dhaco iyo dadka lasoo afduubtaba, hadana ay ka shaqayso Maxkamad Islaamiya, Isgoyska Sos kan H/wadaag iyo kuwo kale oo dhamaanba horay u haan jiray goobo nafta lagala baqo iminkana la arkayo in ay ka jirto xasilooni lataabankaro.
Waxaanse aad uga xumahay in dhibka ay ku mutaan (maxaakiimtu)baacsiga Burcadda iyagoo naftoodana halis ku geliya dadna ay kaga dhintaan markasta, dhaqaalana aan ku haysanin dadkii ay u adeegayeen in hadana dhinacyo bdan oo Bulshadda ihi ay ugu daraan Dacaayaddo aanay waxba ka jirin. sida 1. Culimadda qaar, sida kuwa dariiqooyinka oo uga faa'idaysanaya khilaafkii kala dhexeeyey, in ay wax uga sheegaan howlaha ay Maxaakimtu hayaan, si loolankii ay Bulshadda ugu jireen ay iyagu ku qaadaan.
2. Qab-qablayaasha dagaalka oo uga faa'iidaysanaya Mashruuca ladagaalanka waxa loogu yeero Argagixisadda, iyadoo la ogyahay in qaarkood ayba ku andacoodaan in Alqacidda ay ka howl gasho gudaha Dalka.
3. Warbaahinta oo mararka qaarkood haddii danahooda iyo howsha Maxaakimtu iska horyimaadaan Seeftoodda gasha kala baxa.
4. Iyo dhamaan inta Fowddo ku noolka ah oo afka iska furta, iyaddoon laba maqashiin karin Shareecadda Islaamka maadaama Ficiladda ay ku dhaqaaqaan ee dhaca, Isbaaradda ama ku garabsiinta dadka ku kaca aanay Shareecadda Islaamka ihi ogolaanaynin.
30kii Bishii tagtay ee December 2004, abaarihii 3:35 daqiiqo ee xiliga danbe habeenkii ayaa Weerar lixaad leh oo siwayn loo soo agaasimay lagu soo qaaday Laanta H/wadaag ee Midowga Maxaakimta Islaamigaa ee Magaaladda Muqdisho. Weerarkaas oo ahaa mid aad u qaabaysan Socdayna ku dhowaad 4-saacadood, layskuna adeegsadey Hubka nuucyadiisa kala gedisan, ayaa waxaa la aaminsan yahay marka laga soo tago Meleeshiyaddii horay dadka ugu dhici jiray oo weli hunguri ku jiro, in haddana ay ka qayb galayeen dagaalkaasi dhinacyo cusub oo hor leh, oo ayna ku jiraan Meleeshiyooyin hoos taga Hogaamiye kooxeedyo caan ah.
Waa berigii 7:30, markii ay Rasaastii qabowday ayaan u soo dhaqaaqay dhinca meesha ay wax ka dheceen anigoo isku dayaya bal in aan wax ka ogaado sida ay wax u dhaceen, baaxadda khasaaraha iyo hdal-haynta dadkii isugu soo baxay goobtaas. Marka laga soo tago dadka samo jeclaha ahaa ee la dhacsanaa howlaha Maxkamaduhu ay wadaan, waxaan qarowsaday in ay Muhiim tahay in la dhagaysto Doodda inta ka soo horjeeda. Oday aad u Caraysnaa oo ka mid ahaa dadkii meesha isugu soo baxay ayaan waydiiyey waxa uu ka cabanayo, isagoo aad u xanaaqsan ayuuna igu yiri"Kuwani(Maxkamadaha) waa ay inooga dareen, wiilashii hore (Mooryaantii) ayaa inooga wanaagsanaa" dareenka xamaasadeed ee markaas ka muuqday Odayga iima saamaxaynin in aan Su'aal kale sii waydiiyo ee waan ka sii socday. Gabar kale iyana waxay qabtaa in kooxdii hore(Meleeshiyooyinkii)ay wanaag sanaayeen.Gabadhaan oo ka ganacsata Qaadka ayaan waydiiyey sababta ay ku doorbidayso Meleeshiyaadkii mar haddii ay ku hayeen xasilooni darro Xaafadda iyo isku socodka dadwaynaha ayaa waxay iigu jawaabtay " Suuq la'aan ayaa nagu dhacday, cid maxaad haysaa leh oo Qaadka naga iibsanaysa malahan,habeen kasta waxaa nagu baarixi garooba dhowr Marduuf (xirmo) oo Qaad ah". Waxaan u gartay in gabadhaasi ay ku qanacsanayd Mooryaanta oo marna ka iibsanaya, marna ka dhacaya, markalena laga yaabo in ay kula kacaan falal anshax-xumo. Ninkale oo da'dhexeed ah kuna haysta ganacsi goobta uu Dagaalku ka dhacay, ayaa isagu diidan Lacagta Tabarucaada ah ee lagu howl gelinayo Ciidamadda Maxaakimta. Waxaan su'aalay waxa uu ku diidanyahay mar hadii ammaankii lagu sugayo oo uuna si nadiif ah ku ganacsanayo. Wuxuu yiri" Inaga Qabiilkeenu malahan Maxkamad Islaami ah, sidaas darteed mawaxaan korinayaa Wiilasha Beelo heblooyin?"
Hadaba jawaabahaas oo qaarkood aad loola yaabi karo in ay ka soo yeeraan isla dadkii wax loo qaban lahaa uguna nuglaa xasilooni daridda ayaa ka dhigaysa Hal-xirale aanad garan karin meesha dadkan loo waddo, waa dad aan dantooda garanayn, waa dad Qabiil u kala xiran, oo qoloba meel ay goosatay, midka dadka soo dhexgelayana xittaa laga yaabo in uu caloosha ka jiranyahay. Abwaanadda Soomaaliyeed Suugaanta ayeey wax walba ku dhameeyeen, waxaana la tilmaamaa in inta badan ay ka hadlaan wixii taagan iyo wixii imaan karaba. Dadkeenu sida ay u dhaqmayaan iyo wax maqal la'aantoodu iyo weliba in qaarkood lasii shaqaynayaan weli mooryaantii Dhibkoodii markay arkeen kadib. Waxay i xasuusinaysaa Gabay uu Mariyey Abwaankii waynaa Allaha u Naxariistee C/laahi Suldaan Max'ed (Timacadde) mar uu malaha ka yaabay dhaqanka Soomaalidda oon dantooda garanayn, waxuuna qayb ka mid ah Gabaygiisii Dugsi malahan Qabyaaladdi waxay Dumiso mooyaane ku lahaa sidan::
* Dul iyo hoosba waan ugu dhigaye, waa dix-dhagaxeede
* Anuunbaa damqanayee dheguhu, uma daloolaane
* Dadkaan la hadlayaa baan lahayn, dux iyo iimaane
* Bal inay dalfoof tahay caqliga, dooni laga saaray
* Wixii hore usoo daashadaay, degashanaysaaye
Hadaba inta Mucaaradsan howlaha Maxaakiimta, haddii aad waydiiso Adigoo lagu dhacayo makugu daawadaan dhibka ku haysta?....Marka aad u soo cabato maku waydiiyaan Qabiilkaaga marka horeba, si ay wax kuula qabtaan?........Goobaha ay ka Howlgalaan ma ka dhacaan falal xasilooni darro?.....Madhacaa Dilkii maalin kasta dhici jiray, oo xittaa Wiilasha kirish-booyadda ka ah Gaadiidka Dadwaynaha haddii ay soo daahiyaan Lacagta Leejadda loogu bedelo Xabad?.....Maku haysataa Cabsidii ahayd in Alaabadaada aad soo iibsatay aad iyagoo bed-qaba la dhaafto Wadooyinka ay Maxaakiimtu gacanta ku hayaan, horayse fadhiisin ugu ahaa kooxo Meleeshiyooyin ah?....Ma jirtaa Baqdintii ahayd in aanad qaban karin Talefankaaga Gacanta marka uu kuugu soo dhaco Isgoysyadda qaarkood, ka hor intii aanay Fariisimo ka samaysanin Ciidamadda Maxaakiimtu?. Waxaay ku siinayaan Jawaab mid ah, taas oo ah MAYA. Hadaba Maxay dhibka ku doorteen?..lama garanayo.
Dad badan ayaa laga yaabaa in ay u qaataan in aan difaacayo khladaad ay suurta-gal tahay in ay ku dhaqaaqaan Maxaakiimtu. Hayeeshee waxaan leeyahay Maxkamaddaha cidda howlgelinaysaahi waa Bini'aadam, macsuumna maahan Bini'aadamku, oo khaladaad waa uu ka dhici karaa marka ma in latoosiyaa mise waa in laga dhigo in aanay khaldami karin inta kalena ay khaldami karto?..Waxaa jira in Wariye ka tirsan Idaacadda Hornafric oo lagu magacaabo Xasan Kaafi C/raxmaan (Qoyste) ay xirreen Ciidamada Midowga Maxaakimta, isagoo sida la sheegay ku jiray howlihiisii shaqo, markiiba Hay'adda Warbaahinta ee Hornafric waxay ka bixisay jawaab aan dhihi karo aad ayaa loogu deg-degay, taas oo ay ku sheegayn in koox dabley ihi ay afduubteen Wariye X/Kaafi C/raxmaan, haddiiba ay khaldanyihiin Maxaakiimtu ma khalad, khald ku saxbaa? Sow ma wanaagsanayn in ay la xiriiraan Madaxdda Maxaakiimta si ay u wada saxaan Khalad ka jira iyo waxa keenay in xarig lagu la kaco Weriyahaasi. Howl gal haddii la samaynayo dabcan koontoroolku wuu badanayaa cid aan waxba galabsana waxbaa gaaraya, sidaas darteed waa in dulqaad la muujiyaa. Ugu danbayntii waa in si Shuruud la'aan ah lagu sii daayaa Weriye X/Kaafi, hornafrikna ay Hubka dhigtaa, horseedna ay ka noqotaa wixii danaha Umadda loogu adeegayo, siddii horayba looga bartay.
Faafin: Somalitalk.com | Jan 15, 2005
AKHRI BOGGA MAQAALDA: http://www.somalitalk.com/maqaallo/